प्रभाष र आलियाको फिल्म एकैदिन प्रदर्शनमा आउदै – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. प्रभाष र आलियाको फिल्म एकैदिन प्रदर्शनमा आउदै – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
बाहुबलिका दुई फिल्मबाट निकै चर्चा कमाएका दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रभाषको माग यतिबेला भारतीय फिल्म उद्योगमा राम्रै छ । बाहुबलीबाट हिट भएसँगै उनका फिल्ममा दर्शकले विशेष चासो र रुची राख्न थालेका छन् ।
उनै, प्रभाषले अभिनय गरेको फिल्म ‘राधे श्याम’ जुलाइको ३० तारिखबाट रिलिज हुने पक्का भैसकेको छ । विभिन्न ४ भाषामा रिलिज हुने यस फिल्मको अहिले जताततै चर्चा चलेको छ । किनभने यो समयमा अभिनेता प्रभाषलाई अभिनेत्री आलिया भट्टले चुनौती दिने भएकी छिन् ।
अभिनेत्री भट्टले अभिनय गरेको फिल्म ‘गांगुबाई काथियावाडी’को पनि यहि मितिमा रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ । निर्माणपक्षले जुलाई ३० तारिखमा नै यो फिल्म रिलिज गर्ने घोषणा गरेपछि प्रभाषलाई चुनौती थपिएको हो ।
केहि दिन अघि निर्देशक संजयलिला भन्सालीको जन्मदिनको अवसर पारेर यस फिल्मको फस्टलुक सार्वजनिक गरिएको थियो । फिल्मको फस्ट लुक्स सार्वजनिक गर्दै फिल्मको प्रदर्शन मिति पनि तोकिएको हो ।
‘गांगबाई’को छायांकन अहिले पनि भइरहेको छ। यस फिल्मको छायांकन चाँडै नसकिए समयमा फिल्म प्रदर्शन नहुने होकी भन्ने संकेत पनि गरिएको छ । अभिनेता अजय देवगणको करिब ९ दिनको छायांकन अझै बाँकी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको February 25, 2021 February 25, 2021 91 Viewed